HongKong: GazetyBoky vetaveta sy Baiboly Vetaveta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2007 8:39 GMT
Nosokafan’ny olo-tsy fantatra tamin’ny 15 may tao amin’ny tranonkala truthbible (baiboly tena izy) ny fanenjehana ny Baiboly ho enti-manohitra ny didy navoakan’ny Fitsarana misahana ny lahatsoratra tsy fampiseho masoandro (ang. Obscene Articles Tribunal’s na OAT) manambara fa tsy mendrika ny laharana roa navoakan’ny gazetin’ny mpianatry ny Oniversitey Shinoa.
Hatramin’izao [20 may], nahazo fitarainana 2041 ilay tranonkala, raha mihoatra ny 2300 kosa no voarain’ny Television and Entertainment Licensing Authority ( Tela) mialoha ny faran’ny herinandro. Nanambara ny tao amin’ny Tela fa tsy afaka ny hametraka ny Baiboly ho amin’ny sokajin’ny OAT satria efa boky maodely ary eken’ny fiaraha-monina ny soatoavina apetrany.
Notanisain’ny tao amin’ilay tranonkala avokoa ny ankamaroan’ireo lahatsoratra sy tantara avy amin’ny Baiboly entiny ilazana fa feno herisetra, fanavakavahana ary zavatra tsy fampiseho masoandro ao anatiny, toy ny ray mandry amin’ny zanany vavy, ny fanaovana ankeriny sy ny maro hafa. Na eo aza (izany fanenjehana) izany, dia misy ihany koa fanohanana avy amin’ny kristiana te-hampiasa ny Baiboly ho amin’ny fiarovana ny fahafahana sy ny fahalalahana hiteny ao Hong Kong(ho an’ilay tranonkala).
Ao amin’ny zoron’ny filazana ao Aterineto iray ( inmediahk.net) dia voasoratra fa :
(Michael Servetus) 的殘酷逼害。
Tsy tokony hanadino ny lesona napetraky ny tantara isika : Ny fahadisoana goavana indrindra nataon’ilay mpanitsy fivavahana Calvin tamin’ny taonjato faha-16 dia ny nampahoriany an’i Michel Servet.
Mety hieritreritra ny sasany fa ny fitarainana noho ny Baiboly dia manosika io boky io hamidy eny amin’ny latabatry ny fanaovan-davanty. Izao anefa, mendrika ny Baiboly mihitsy ny fametrahana azy eo ambony latabatra mba hamirapiratra ny voninahiny. Tsy tokony afenina anaty vata sarihana ny Baiboly na apetraka ao an-damosin’ny dabilio ao am-piangonana hovakiana indray isan-kerinandro monja. Tokony aseho manerana izao tontolo izao fa ny fampianarana ao amin’ny Baiboly ho antsika dia fampiharana isan’andro ny fahamarinana, ny famindram-po ary ny fitiavana.
Cowcfj mpitoraka blaogy iray dia niditra tao anatin’ny fihetsiketsehana ihany koa. Toy izao ny fanazavany :
Ny tanjoko tsy hamelively ny Baiboly velively, fa mba te-hampiseho kosa ny fitsarana tsy masaka ataon’ny OAT…Mino aho fa na dia afaka mitondra ny raharaha tao amin’ny OAT aza ny Tela dia tsy ho sahy nametraka azy ho amin’ny « vetaveta sokajy faharoa », nikendry tohina ny ming pao (gazety ao an-toerana) an’ny mpianatry ny Oniversitey fotsiny izy ireo. Ampiasaina fotsiny izy ireo ho fitaovan’ny Fikambanan’ny Marina sy Mazava (rafitra ivelan’ny fiangonana tohanan’ny fiangonana nentim-paharazana)
Mitanisa an’i Malcom X kosa i Memory-Melody-Mentality hanazavany ny hevitry ny fihetsiketsehana hanazavany ny hevitry ny fihetsiketsehana, ny kendreny dia ny hahazoana fialantsiny avy amin’ny OAT hiaikeny ny fahadisoany :
著名黑人民權鬥士Malcolm X 曾說：「你跑到他的宮邸，希望他改正問題－－但偏偏問題就是他製造出來的。他就是罪犯。你不要把你的事交給罪犯，你應該把罪犯送到 (國際) 法庭。」我們都只是一群小市民，我們沒有能力把淫審處送到國際法庭，但我們有能力吸引世界的目光。我們將繼續以荒謬回應荒謬，我們會一直嘗試再一次讓路透社的oddly enough 報導香港，直至淫審處面對他的錯誤，公開道歉。
Niteny indray mandeha ilay mafana fo amin’ny fiarovana ny zon’olombelona Malcom X hoe : « mihazakazaka mankany amin’ny tranon’ny filoham-pirenena ianareo maniry azy hanitsy olana, nefa izy ihany no nahatonga ny olana, izy no olo-meloka. Tsy tokony hamela ny olo-meloka hoafaka ianareo, fa nandefa azy any amin’ny Tribonaly (iraisam-pirenena) ».
Olom-pirenena avokoa izahay rehetra, tsy manam-pahefana handefa azy any amin’ny Tribonaly iraisam-pirenena. Saingy afaka misarika ny mason’izao tontolo izao kosa. Hanihany no ampiasainay ho setrin’ny didim-pitsarana mananihany. Hikaro-dalana hatrany izahay hahatonga ny masoivoho mpanangom-baovao manerantany sahala amin’ny Reuters hanoratra hoe « oddly enough » (très insolite na trangan-javatra hafahafa loatra) rehefa mitodika aty Hong Kong hiresaka momba azy, mandara-paneken’ny OAT fa nanao fahadisoana izy ka miala tsiny ampahibemaso.
Hatramin’ny nadavan’ny Tela hamaha ny raharaha teny amin’ny Tribonaly, dia mbola nanampy fanontaniana i Plastichk momba ity mizana tsindrian’ila ity :
Lazao ahy, fahefana avy amin’ny lalàna manao ahoana no ahafahan’ny Tela manome « immunity » (na mamapanao ho tsimatimanota) ny « Lahatsoratra Literatioram-pivavahana fahagola sy manatantara » ? Ahoana ny fomba hanasongadinana ny atao hoe « toe-panahy faka tahaka eken’ny ankamaroan’ny olo-tsotra ao anaty fiaraha-monina amin’ny ankapobeny » ?
Anjatony monja ny fitarainana azo tamin’ny gazetin’ny mpianatry ny Oniversitey Shinoa, nefa maherin’ny 2000 ny fitarainana azonay tamin’ny baiboly tao anatin’ny roa andro monja. Miovaova araka ny vanim-potoana ny « toe-panahy faka-tahaka », mety ho nekena izany tamin’ny fotoana lasa, nefa tsy midika avy hatrany fa mbola hoekena amin’ny fotoana ho avy. Mariho fa sampan-draharaham-panjakana ny Tela fa tsy tribonaly tsy akory. Raha fehezina izany dia misy mizana tsindrian’ila eto.
Tokony hangina ve izahay, sa tokony hijoro kosa hanohitra ity fomba tsy rariny ity ? sa hitory ny fanjakan’ny Baroa (hametraka fitoriana ny sampan-draharaham-panjakana mihoa-pahefana any amin’ny Governemanta) ? Sa hanangom-bola mba hamerenana indray ny fitsarana ? Eritrereto tsara hoe izay tokony hatao !
Nadikan’ny ESWN ilay tohivakam-panontaniana mikasika ny « inceste » sy ny fitiavan’ny biby nivoaka tao amin’ny Gazety-bokin’ny mpianatry ny Oniversitey Shinoa. Tamin’ny herinandro teo koa dia nanamarika tamin’ny gazety mpivoaka eto [Honk Kong] ny OAT fa nandika ny fitsipika mandrara ny famoahana fahavetavetana sy tsy fampiseho masoandro izy noho ny nitanisany mivantana ny fanontaniana tohivakana sasany nalaina tao amin’io Gazety-boky io ihany. Noho izany dia miandry an’i ESWN ihany koa ny onitra faratampon’ny HK $400.000 sy ny fampidirana am-ponja 12 volana. Ooooadray…tamin’ny nametrahako ny rohin’ny ESWN teto amin’ny GVO, dia tafiditra anaty sambo ihany koa aho. Ankehitriny mety ho azonareo ny dikan’ny hanihany (Fitarainana noho ny Baiboly) ho setrin'ny hanihany (OAT's ruling against student magazine and obscene hyperlink).
Bravo pour l edition malgache de la part de l edition en français de Global voices!
22 Septambra 2007, 11:31
Hiresaka koa -> Claire